Maxkamadda Ciidamada Qalabka Sida ee Soomaaliya oo laga furay Jowhar – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
7th February 2015 A warsame Af Soomaali, Featured 0
Mareeg.com: Maxkamadda Ciidamada Qalabkda Sida ee Soomaaliya ayaa maanta laan ka furatay magaalada Jowhar ee xarrunta gobolkaas, kadib markii uu halkaas booqdayt wafdi uu hogaaminayey gudoomiyaha Maxkamadda Darajada Koowaad, Gaashaanle Xasan Cali Nuur Shuute.
Guddoomiyaha ayaa si rasmi ah uga furay maxkamada ciidamada qalabka sida iyo xafiiska xeer ilaalinta maxkamada ciidamada magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellaha Dhexe.
Munaasabada furitaanka maxkamada ciidamada qalabka sida oo ka dhacday xarunta maxkamada gobolka Sh/dhexe ayaa waxaa goobjoog ka ahaa guddoomiyaha gobolka Sh/dhexe, Cali Cabdulahi Xuseen guddoomiye ku xigeenka arrimaha siyaasada iyo amniga Axmed Meyre Makaraan, saraakiil ka tirsan ciidamada qalabka sida iyo mas’uuliyin heer degmo iyo heer gobol isugu jira.
Hadal kooban oo uu halkaa ka jeediyay guddoomiyaha Guddoomiyaha maxkamada darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida Gaashaanle Xasan Cali Nuur Shuute ayuu ku sheegay in xafiis ay ku yeelanayso laga bilaabo maanta maxkamada ciidamada magaalada Jowhar ayna sidoo kale maxkamadu tegi doonto goobaha furumaha ah wixii la soo qabtana isla goobta lagu soo saari doonaa maxkamad.
“Waxaan u dirayaa fariin shacabka gobolka in dadka ka tirsanaan jiray Alshabaab ee isaga soo tegey in lagu soo wargeliyo maamulka gobolka iyo ciidamada ammaanka si loo ogaado loona diiwaangeliyo.”ayuu yiri Gaashaanle Xasan Shuute.
Furitaanka maxamada ciidamada qalabka sida xafiiskeeda Jowhar ayaa waxaa soo dhoweeyay guddoomiyaha gobolka Sh/dhexe Cali Cabdullahi Xuseen waxana uu sheegay in maamulka gobolka uu garab istaagi doono sidii maxkamada howlaheeda u gudan doonto.
Guddoomiyaha gobolka Sh/dhexe, Cali Cabdullahi Xuseen waxa uu ku soo dhoweeyay wafdiga uu horkacayay guddoomiyaha maxkamada inay lug ku soo maraan suuqyada magaalada Jowhar. Waxana ay wafdigan soo booqdeen suuqa ugu weyn magaalada Jowhar gaar ahaan qudaarta iyo suuqa xoolaha iyagoo dadkii ku ganacsanayay iyo dadweynihii kale ee suuqyadaa ku sugnaa ay si wanaagsan u soo dhoweeyeen wafdiga.
Sidoo kale, Col. Cali Ibraahim Yuusuf oo ah taliyaha guutada koowaad ee ciidamada militariga Soomaaliya ayaa bogaadiyey maxkamadda, wuxuuna yiri “Waan u mahadcelineynaa, aad ayaana ugu baahnayn, in badan ayaan sugeynay, maadaamaa illaahay oo keeney waan u mahadcelineynaa, waanan la shaqaynaynaa”.
Mucaaridka Siilaanyo oo midoobay kana digay dib u dhac ku yimaada doorashada